xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: မြန်မာ – အိန္ဒိယ နယ်စပ် တွင် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဗဟို ဌာနကြီး တစ်ခု ယခု နှစ်ကုန် အပြီး ဖွင့်လှစ် ရန် မျှော်မှန်း
ESTABLISHED : JANUARY 01 , 2011
မြန်မာ – အိန္ဒိယ နယ်စပ် တွင် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဗဟို ဌာနကြီး တစ်ခု ယခု နှစ်ကုန် အပြီး ဖွင့်လှစ် ရန် မျှော်မှန်း
မြန်မာ – အိန္ဒိယ နယ်စပ် ဒေသ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဗဟို ဌာနကြီး (ITC) တစ်ခုကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် အပြီး ဖွင့်လှစ်ရန် အိန္ဒိယ အစိုးရက မျှော်မှန်း ထားသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ် အရ ITC ဖွင့်လှစ်မည့် နေရာသည် ၀ါဇီဟိုမှ အဗန်ကူသို့ ကီလိုမီတာ ၇၀ အကွာ တွင် တည်ရှိပြီး ထိုနေရာ သို့ ခြောက် ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိ လမ်းတစ်ခု သွယ်တန်းရန် သာ လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို လမ်းဖောက် လုပ်ရေးတွင် ပထ၀ီ အနေအထားအရ အခက်အခဲ အချို့ ရှိနေသော် လည်း စီမံကိန်း ပထမ ခြေ လှမ်း အဖြစ် ITC လျာထား မြေနေရာ တွင် ရဟတ်ယာဉ် ကွင်းတစ်ခု ဆောက် လုပ်ရန် စတင် သတ်မှတ် နေပြီဖြစ် ကြောင်း၊ ITC အတွက် လျာထားမြေ သည် ဧက ၁,၀၀၀ ထက် မနည်းရန် သတ်မှတ် ထားကြောင်း၊ ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေး နေရာ များကိုလည်း အဗန် ကူရွာသားများက တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ITC တည်ဆောက်ရန် တင်ပြ ထားသည့် မြေနေရာ သို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ကျွမ်းကျင် ပညာရပ် များ လေ့လာ ခဲ့စဉ်က နှစ်လ၊ သုံးလ အတွင်း ရဟတ်ယာဉ် ကွင်း တစ်ခု ဆောက်လုပ် လိုကြောင်း ထုတ် ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ITC ကြောင့် နာဂမြေတွင် ဒီမာပူသည် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် လေရှီး သည် လည်းကောင်း ကုန်သွယ်မှု ဗဟိုချက် ဖြစ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ITC တည်ဆောက်မှု ပြီးဆုံး ပါက လူငယ်များ အတွက် ကုန်သွယ် မှု ပြုလုပ်ရန် အကြီးအကျယ် လမ်းပွင့် လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံ အ ဆောက် အအုံ တိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင် ကြမည့် ကန်ထရိုက်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ များအား ယခု အစီအစဉ် သည် နာဂ များ၏ အနာဂတ် ကောင်း စားရေးကို ရည်ရွယ် ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံမှ ITC တည်ဆောက်မည့် နေရာ အထိ ၁၂ ကီလိုမီတာ သာဝေးကွာ ကြောင်း၊ ITC တည်ထောင်ခြင်း သည် မြန်မာ – အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ် မှုပမာဏ ကို မြှင့်တက် နေမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ITC တည်ထောင်ပြီးစီး ပါက မြန်မာနိုင်ငံ မှ အိန္ဒိယ သို့ လယ် ယာထွက် ကုန်များ၊ သစ် အမျိုးမျိုး၊ ကျောက်မျက် ရတနာနှင့် တိုင်းရင်း ဆေးများ တင်ပို့ မည်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ကျောက်မီး သွေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ လက်ဖက် ခြောက်၊ သစ်အချော ထည်၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များ၊ အ၀တ်အထည် များ၊ ဘိလပ် မြေ၊ သဲနှင့် သံမဏိ ထွက် ကုန်၊ ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက် များ တင်ပို့ နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 4:49 AM
Myanmar Standard Time
<!-weather in yangon, myanmar on your site - html code - weatherforecastmap.com -->
Forecast for Yangon
နေ့အလိုက် သတင်းဓါတ်ပုံများ (12)
လစ်ဗျားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက် ၊ ဗြိတိန်တွင်...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
ကဒါဖီ၏တပ်များ ထိုးစစ်ဆင် ၊ သူပုန်များဆုတ်ခွာ
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ တစ်လျှောက်ရှိ မြို့ကြီးများ ငလျင...
နိုင်ငံတော် သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ...
အစိုးရ အဖွဲ့သစ် ၀န်ကြီးများအမည်စာရင်း
နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်...
ဒီအစိုးရကိုလက်မခံလို့ ဘယ်အစိုးရကိုလက်ခံမလဲ ? ( ၂ ...
အစိုးရသစ် ပေါ်ပေါက်ပြီးပါက ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း အမျိုးအစ...
ပုဂံမြို့ အလှပုံ များနှင့် ခရီးသွား လမ်းညွှန်များ ပ...
ဒီအစိုးရကိုလက်မခံလို့ ဘယ်အစိုးရကိုလက်ခံမလဲ ?
ကမ္ဘာ့ လက်နက် အရောင်းချဆုံးနိုင်ငံများ
မြ၀တီမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လက်ကမ်းစာစောင်များ...
ဂျပန် ဆူနာမီအတွက် ဒေါ်စုကြည်မှ ကဗျာများ ပေးပို့ကူညီ...
ဖူကူရှီးမား အနုမြူဓါတ်ပေါင်း ဖိုအနီး ရေဒီယိုသတ္တိကြ...
အနုမြူ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် ၁၈ မိုင်ပတ်လည်မှ အမြ...
NLD ၏ အရက်သမားကွန်ယက်
ဒေါ်စုကြည် ဧရာဝတီနဲ့ DVB တို့ စားခွက်လု ကြလေပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမြေငလျင် နောက်ဆက်တွဲသတင်း (၄)
မြန်မာနိုင်ငံမြေငလျင် နောက်ဆက်တွဲသတင်း (၃)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ စာအုပ်ရေးသားသူ အဖမ်းခံရ
မြေငလျင် နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ( ၂)
မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာလေမြို့အနီးြ...
ကျွန်ုပ် နှင့် ထူးဆန်းသော ပန်းချီဆရာ ၂ ဦး ( အပိုင...
စီးပွားရေး ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ ထားဘို့လိုလားကြောင်း ဒေါ်...
အစ္စလမ်မစ် တပ်မတော်များအားလုံး မိမိနှင့်ပူးပေါင်းကြ...
အမေရိကန် USF- 15 ဂျက်တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းပျက်ကျ
UnionPay ကတ်သုံးနိုင်မည့် စာရင်း၌ မြန်မာပါဝင်
ကျွန်ုပ် နှင့် ထူးဆန်းသော ပန်းချီဆရာ ၂ ဦး
အချိန်ခါမဟုတ် ရွာသွန်းခဲ့သည့် မိုးနှင့်လေပြင်းများ...
အမေရိကန်စပိုင် တစ်ဦအား ကျူးဘားတရားရုံး ထောင်ဒဏ်စီ...
လစ်ဗျားကို လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွင် အရပ်သားပစ်မ...
Tomahawk ( တိုမဟော့ ) ဒုံးကျဉ်အကြောင်း
ရေရှည်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲသွားမည်ဟု လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒ...
အနောက်နိုင်ငံတပ်များ လစ်ဗျားကို လေကြောင်းမှကျုးကျေ...
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် မှ ဒုံးလက်နက်နှင့် ပစ်ခ...
မြန်မာ့အသွင် ကူးပြောင်းရေး အတွေးအမြင်
အသစ်ထွက်IE9ကို တစ်စက္ကန့်လျင် ၂၇ကြိမ် ဒေါင်းလုဒ်ချ ...
မြန်မာ ဘောလုံးလောက တိုးတက်မှု များအား ဖီဖာ ဥက္ကဋ္ဌ ချီ...
တိုကျိုမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက ကောင်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရ...
FIFA ဥက္ကဌ ၏ခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ဂျပန်နျူကလီးယားစက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြန်မာနိုင...
ဆူနာမီကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးသော ဒေသများ၏ ယခင် နှင...
ကောလဟာလ သတင်းတစ်ခုအတွက် သတင်းဓါတ်ပုံ
နိုင်ငံတော်ကို ပြောင်းလဲချင်တာလား သူတို့ ဘဝ ကိုြေ...
မြန်မာ့ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် တကယ်ပဲများနေပြီလား
မြန်မာ့ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီ...
အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ အလုပ်အကိုင်များသာမက အဆင့်မြ...
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ပြည်သူ့ စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ ကိစ္စမေး...
တိုကျိူနှင့် မိုင် ၂၄၀ အကွာ ပစ္စဖိတ်ပင်လယ်ဗဟုိုပြ...
အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ...
တောင်ကိုရီးယား – အမေရိကန် ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု ...
ထူးဖောင်းဒေရှင်းက စီစဉ်သော ပူတာအိုမြို့၌ ပြုလုပ်သည...
မြန်မာ – အိန္ဒိယ နယ်စပ် တွင် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ...
NLD ဇာတ်သဘင်အဖွဲ့ ကြီး ပြန်လာပြီ
Tablet ကို ဘာကြောင့် ကြိုက်ရသလဲ
အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်မျာ...
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းကြမယ် ဆိုပါရင်
ကမ္ဘာ့ စက်သုံးဆီဈေးနှုံး အခြေအနေ
အင်ဂျင်မပါဘဲ မောင်းနှင်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင...
Antonov-148 အမျိုးအစား လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျ
သတင်းခေါင်းစဉ်များကပြောသော သတင်းဌာနများ၏ အတွင်းသရု...
သူများ ယောင်လို့ ယောင်
အာရပ်ကမ္ဘာ အုံကြွမှု၊ ၀ိကီလိခ်နဲ့ အမေရိကန်
ဂျပန် JBIC ဘဏ်၏ ကူညီမှု ကြောင့် ထားဝယ် ရေနက် ဆိပ်ကမ...
လွှတ်တော် ဥပဒေမူကြမ်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အနာဂတ...
လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီများတွင် ပါတီစုံ ပါဝင်လာ
၂၀၁၀နိုင်ငံခြားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှု သမိုင်းတစ်လျောက် ...
အင်းစိန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တရားခံအား ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီ...
ဥပဒေအထက်မှာ လွှတ်တော် ရှိနေသလား
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော်အစည်းဝေးတွေမှာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်း ကိစ္စ ဆွေးနွေြး...
ဤရက်ပိုင်းအတွင်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏အမည်သည် ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှားများ ၊ လူမှုကွန်ယက်များ ၊ သတင်းမီဒီယာများတွင် အတော်ပင်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါသည် ...
၂၀၀၇ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် လို့ သူ့ကိုယ်သူရာထူးပေးထားတဲ့ ထင်ကျော်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဆိုတဲ့ Video လေးကို Burma VJ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂ ဦး ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
၁၅-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတင်းဖော်ပြချက်(၁) နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်...
ELEVEN မီဒီယာက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသရေဖျက်မှုကျူးလွန်ပြန်
မီဒီယာလောကတွင် မီဒီယာသမားချင်းလည်းမတဲ့ ၊ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့လဲအဆင်မပြေ ၊ သွားဆက်ဆံမိသူ မည်သူနှင့်မဆို အဆင်မပြေမှုများလွန်းသဖြင့် ဆူးလှည်းကြီးဟု...
မီဒီယာကိုခုတုံးလုပ်၍စီးပွားရှာနေသာ သန်းထွဋ်အောင် (သို့) Eleven Media
အစိုးရရဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိပ်ဆုံးကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေတဲ့ မီဒီယာကိုပြပါဆိုရင် ပွကြီး Eleven မီဒီယာကိုပြရမှာပါဘဲ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးကိစ္စများတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ကျူးကျော်စော်ကားမှု အထင်းသားပေါ်နေ၏ ၊နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ မြန်မာပြည်သူတိ...
ဘာသာပြောင်းမည်ဆိုသော လူပျက် ဇာဂနာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ စုဝေးနေထိုင်သြလို၊ ဘာသာပေါင်းစုံလည်း ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာ...
နတ်တွေများ သတင်းထောက်လုပ်နေပြီလား ELEVEN MEDIA
ELEVEN မီဒီယာရဲ့ ကချင်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါ ၊ KIA က တံတားချိုး ၊ လူနေရပ်ကွက်ထဲမိုင်းခွဲ ၊ ရထားလမ်းမိုင်းထော...
About Dr. Sate Phwar
Voice Of Myanmar. Powered by Blogger.